Ianaro ny fomba fanaovana fantsona fluorescent - Ikkaro
firosoana >> Ahoana no hanaovana azy >> Ahoana no anaovana fantsona fluorescent
Ahoana no anaovana fantsona fluorescent
Ity horonan-tsary manaraka ity momba ny rafitra famokarana fantsona fluorescent no tena tiako indrindra hatreto amin'ireo rehetra hita tao Ahoana no hanaovana azy.
Asa tena kanto an'ny tsipika famokarana.
Ny fiasan'ny fantsona dia hazavaina amin'ny horonantsary, ny atiny anatiny dia rakotra fosfor izay no manazava rehefa ampidirina am-pitoerana ny fidiran'ny mercury izay ampidirina. Fa andao handeha amin'ny antsipiriany bebe kokoa
Tamin'ny taona 1909, noheverin'ilay frantsay George Claude fa ilay frantsay Thomas Edison no namorona ilay jiro neon tamin'ny alàlan'ny famoahana herinaratra tamin'ny entona misosa.
Diovina amin'ny rano mafana ny fantsona hanalana ny loto,
Ny fantsona dia hafanaina amin'ny endrika tiana amin'ny alàlan'ny famoritana ny vera.
Ahosotra phosforor manify no apetaka ao anaty fantsona. Ny phosphor dia ilay mamoaka ny hazavana, manova ny ultraviolet izay novokarina avy amin'ny fanamafisana ny merkiora.
Ny fosforôma be loatra dia esorina, voaisy tombo-kase ary ampiasaina ny elektronika,
miaraka amina ranoka amin'ny filament ao anaty cathode izay rehefa mafana dia mamoaka elektrôna.
farany esorina ny rivotra ary ampidirina ny rano mitete avy amin'ny merkiora izay ilaina mba hiasa ny zava-drehetra
Amin'ny farany dia dingana sarotra izy io na dia teo am-piandohan'ny taonjato faha-20 aza ary mbola mitohy mandraka ankehitriny. Ny antsipiriany mahaliana momba ny fizotry ny famokarana dia ny kofehy, ny kodia izay itsapana ny fantsona rehetra sy ny famehezana azy.
Izany rehetra izany sy ny antsipiriany izay tsy napetrakay taminao dia afaka mahita azy ireo tsara ao amin'ilay horonan-tsary.
Tsy io no singa ekolojika indrindra any, ary mieritreritra tsikelikely aho fa hahemotra izy ireo, saingy mendrika jerena ilay horonan-tsary.
Raha liana kokoa amin'ny hahafantatra ny antony fiasan'izy ireo ianao dia avelako rohy roa ho anao
Ahoana ny fomba fampifanarahana mekanisma famorian-drano ...
V ho an'i Vendetta avy amin'i Alan Moore sy David Lloyd
Mpahay jeografia iray sahirana nataon'i Nahúm Méndez
Sokajy Ahoana no hanaovana azy Ticket navigation
Manao diamondra sentetika - hosoka